रिस कसलाई पो उठ्दैन र ? रिस नियन्त्रण गर्ने नौ उपाय यस्ता छन्, | Seto Khabar
रिस कसलाई पो उठ्दैन र ? रिस नियन्त्रण गर्ने नौ उपाय यस्ता छन्,
कमजोरी केलाउने : प्राय मानिसले अरुलाई मात्र दोषी देख्छ तर आफ्नो कमजोर हेर्दैन । झगडा वा रिस उठ्नका कारणलाई रचनात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसमा आफ्नो पनिा दोष हुनसक्छ । आफ्नो दोष छ भने माफ माग्दा प्रतिष्ठा बढ्छ । यसले सकारात्कम बाटोमा डोर्‍याउछ ।एजेन्सी